Mipoitra avy amin'ny The Green Inferno ny tranofiara
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Mipoitra avy amin'ny The Green Inferno ny tranofiara
by Admin Aprily 16, 2014
by Admin Aprily 16, 2014 836 hevitra
Fotoana kely taorian'ny tsy nanananay na inona na inona hotaterina momba izany Ilay Afobe Maitso, Ny fitiavana an'i Eli Roth ho an'ny sarimihetsika toa Famonoana olona avy amin'ny kanibal. Tamin'ny faran'ny taona lasa dia fantatsika fa ny Open Road Films dia hanome sarimihetsika an-tsehatra amin'ny 5 septambra amin'ity taona ity, na dia mbola mbola tsy nahita tranofiara na sary mbola maro aza izahay avy amin'ny fiverenan'ny Roth nandrasana hatry ny ela ny seza talen'ny talen'ny.
Nampanantena izahay fa hitazona anao hatrany isaky ny maheno bebe kokoa izahay ary anio dia manatanteraka izany fampanantenany izany izahay. Ny tranofiara ho an'ny Ilay Afobe Maitso nivoaka ihany avy tao anaty ala ala feno olona, ​​ary eto izahay anio hanolotra azy ho anao eo amin'ny lovia volafotsy. Ary ratsy, matsiro ve izany.
Tsindrio ny bokotra milalao etsy ambany mba hilentika ny nifinao amin'ny fijerena voalohany ny iray amin'ireo horonantsary mampihoron-koditra andrasana indrindra tamin'ny 2014, izay tonga taminay Moviefone!
In Ilay Afobe Maitso, mpiara-manoratra sy notarihin'i Eli Roth, vondrona mpikatroka mafàna fo mandeha any Amazon amin'ny ezaka hamonjy foko iray tsy ho lany tamingana. Nihazakazaka ilay dia ary nampihoron-koditra rehefa nahatsapa izy ireo fa manandrana miaro foko mpihinana olona… ary saika izy ireo no ho làlana farany.
Amin'ny maha-mpankafy ny sarimihetsika an'i Roth teo aloha, dia andrasako fatratra ity iray ity, izay tokony ho fofonaina madio, tao anatin'ireo horohoron-kevitra rehetra paranormal izay nitobaka tao amin'ny biraon'ny boaty tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fahaizan'i Roth ho an'ireo marary, miolakolaka ary mahatsiravina dia mety ho ilay tifitra teo amin'ny sandriny ilain'ny karazana, ary tsy andriko ny hampifantoka ny masoko amin'ireo horohoro miandry.
Inona no lazainao ?!
Jereo ny Cateories Select Category 4K UHD (8) Amazon (sarimihetsika) (11) Amazon (andiany) (12) AppleTV + (6) Blu Rays (22) Horohoro amin'ny hatsikana (50) Tantara an-tsary (14) Zavatra tsara hividianana (35) Cool Stuff tokony hatao (8) Vaovao momba ny fialamboly (9) Facebook (andiany) (1) Angano (45) Rakitra hita (27) Gore (24) Halloween (3) Haunts (6) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (64) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (11,061) Sarimihetsika mahatsiravina (461) Horror Series (139) Subgenres mahatsiravina (11) Hulu (andiany) (6) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (43) Resadresaka nifanaovana (andiany) (5) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (41) Lisitry (andiany) (2) Tsena (21) Monster Horror (10) Sarimihetsika (3) Hevitra momba ny sarimihetsika (79) Sarimihetsika (17) Mozika (39) Netflix (sarimihetsika) (33) Netflix (andiany) (51) Tsy angano (5) Paranormal (77) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (53) Andiany (1) Famerenana andian-dahatsoratra (10) Shudder (sarimihetsika) (57) Shudder (andiany) (19) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (40) Sarimihetsika mivantana (124) Streaming Series (48) Kilalao (5) Tranofiara (lalao) (1) Tranofiara (sarimihetsika) (316) Tranofiara (andiany) (51) Lalao trailer (1) Heloka tena izy (49) TV Series (6) Lalao video (200) YouTube (sarimihetsika) (4) YouTube (andiany) (13)
Handresy ny fialan-tsasatra Doldrums amin'ny Shudder amin'ny Novambra...
Oktobra 25, 2021
Ny talen'ny 'Midnight Mass', Mike Flanagan dia te hanao...
Niverina ny 'The Last Drive-In' an'i Joe Bob Brigg...